कोरोनाको भाईरसबाट बच्ने आदिबासी ज्ञान – Satabdi News
होमपेज / समाचार / कोरोनाको भाईरसबाट बच्ने आदिबासी ज्ञान
कोरोनाको भाईरसबाट बच्ने आदिबासी ज्ञान
अहिलेको जलवायु परिवर्तन त्यसतै दण्ड हो हामीले भोगिरहेको । रासायनिक र विषदियुक्त खानेकुराले निकालेको क्यान्सर, अब पाँचौ जेनेरेसन इन्टरनेट (5G) ले उत्पन्न गर्ने छन र उच्च विद्युत प्रसारण लाइन ले निकाल्ने electronic Magnefield को कारण बढने क्यान्सर र गर्भपतन त बढेरै जाने हो । एकाथरि बैज्ञानिक, वातावरणविद्हरु ५ जी ल्याउनु हुन्न सुसाइडल हुन्छ भनेका छन् । तर दुनियालाई फाष्ट इन्टरनेट चाहिएको छ । सरकारमा बस्नेलाई कमिशन । “०७२ सालको भुकम्पमा आफ्नै घर संग डर लाग्थ्यो अहिले ०७६ सालको कोरोनाले आफनै मान्छे संग डराउनु परयो ।”टहल थामी आफनो फेसबुक वालमा भन्छन, “ यो भन्दा के हुन्छ विडम्बना ? कहिलेकाहीँ अचम्म हुदो रहेछ विपत्ति परेको बेलामा । ०७२ सालमा भुकम्प गए पछि भविष्यबक्ताहरु धेरै निक्ले फेरि भुकम्प जान्छ भनेर भविष्याबाणी गर्नेहरु । माताहरु, पण्डितहरु देखि साधारण मान्छेहरु पनि आतंक फैलाउने ।
अहिले कोरोनाको समयमा कोही शंख फुक्दै मन्दीरमा पूजा गर्ने, कोही कोट सुट लाएर जिसस् क्राइष्ट पुकार्दै कोरोना भगाउने कोही गाइको गहुँत अर्थात पिसाव र गोबरले कोरोना निको हुन्छ भन्ने उत्पटयाङहरु देखा पर्दैछन् । कुन देशमा हो जिससले बँचाउछ भन्दै मान्छे भेला गरेर कोरोना जोखिम बढाएको समाजिक संजालमा आएको सत्य हो कि के हो थाहा छैन । तर आदिवासीहरुले हजारौं बर्षको अनुभव बाट सिकेको ज्ञान दुनियाबाट अलग्ग रहनु यस्तो बेलामा काम लाग्छ । कठीन होला तर प्रयास गरौं । हाम्रा दुनिया इन्टरनेटबाट यति ग्रस्त छ कि । १२ घण्टाको थकित यात्रापछि होटलमा बास बस्न गयो भने खाना र सुत्ने ठाउँ भन्दा पनि इन्टरनेट छ ? भन्ने पहिला सोध्ने कुरा आउँछ । मलाई पारागुवेन आएरो समुदायको इमेसिनेको गीतको बोल याद आयो ।“ म हामी स्वतन्त्र भएको बेला, रोग ब्याधी नभएको बेला, सिमा नलागेको स्वतन्त्र घुमफिरको बेला सम्झेर गीत गाउँछु ।
एउटा नौका चढेर बाहिर दुनियका मानिसहरु आए त्यो नै हाम्रो दुर्दशा थियो । तिनिहरुले सबै हाम्रा कुरा खोसे, हाम्रा महिलालाई दुब्र्यवहार गरे । हाम्रा बालबच्चालाई तिनिहरुको दुनियमा लगे । हाम्रा बालबच्चा आउन त आए उनीहरु हामी जस्ता होइनन् तिनिहरु जस्ता भए । आफनै घर भत्काउन थाले आफ्नै संस्कृति मास्न थाले, “(कार्लोस कमाको नसार) । इण्डिजिनियस टेलिभिजनमा डा. अरुण उप्रेतिको अन्तरवार्ता सुने । भारतको एक डाक्टरको पनि । उनीहरुले हाम्रै परम्परागत जडीबुटी, घरैमा प्रयोग हुने मरमसलाले इम्यून सिस्टम बढाउन मद्धत गर्छ रे । कोरोनाले इम्यून सिस्टम कमजोर हुनेलाई बढि प्रभाव पार्छ रे । यदि त्यसो हो भने मलाई हाम्रा आदिवासीय ज्ञान मा आधारित खानेकुरा र औषधी के छ । त्यसलाई प्रयोग गरौं ।
ज्वरो खोकी लाग्दा मेरो बोजुले मलाई बनाइदिने औषधी जसले म बच्चा हुँदा ज्वरो खोकी च्वाटेै हुन्थ्यो, त्यस्को सम्झना गरायो । हाम्रा औषधी विज्ञान र सम्पदा र साँस्कृतिक थलो एकअर्कामा अपरिहार्यरुपमा जोडिएको छ । जस्तो खोकनाको पिंग द्यः काठमाडौं भरिका बैद्यहरु आफ्ना विद्या सिके पछि पारंगत भयो भएन भन्ने विषयमा त्यहाँ गएर पूजा गर्दै उपचार गर्नुपर्ने (अशोज महर्जन ) । कतै हाम्रै बैद्यहरुसँगको ज्ञान छ की ? २००५ मा सुनामी आँउछ भनी समुन्द्रतट सुरक्षा अधिकारीलाई बताउँदा । दिउँसै जाँड खाएको भनी नपत्याएका र आदिवासीहरु चाही सुरक्षित ठाउँमा गएर बसेको कारण उनीहरु बाँचे । धेर्रैको अकालमा ज्यान गयो । त्यत्रो बैज्ञानिक ज्ञान हुने र उपकरणले थाहा नपाएको सुनामी आउने थाहा पाउने ज्ञान आदिवासीमा छ । कम्प्यूटर विना आँधीको अनुमान गर्न सकिन्छ भने वेकारमा कम्प्युटर चाहीयो किन ? यो छलफलको विषय होला । हुन त फाष्ट ट्रयाक खन्ने क्रममा पिंग द्यः भत्काउन लागिएको छ ।
यो भत्कियो भने बैद्य ज्ञान पनि हराएर जाने निश्चित छ । त्यसैले यो बेला हाम्रा ज्ञान खोजौं फेसबुकमा कुनदेश सहायता लिएर नेपाल आउन ठीक परेको छ भन्दै पोष्ट गर्न भन्दा यता ध्यान दिउँ । यो मगन्ते र आसे बन्न छार्डौ । अहिलेको बैज्ञानिक भनेको स्वास्थ्य विज्ञानको परिभाषा अनुसार मानिस स्वास्थ्य हुन शारिरीक र मानसिक स्वास्थ हुनुपर्छ रे । तर यो अपुरो छ आदिवासी ज्ञानको कसीमा । किनकि आदिवासी स्वास्थ्य ज्ञानमा एउटा मानिस पूर्ण स्वास्थ्य हुन ४ कुरा संतुलनको आवश्य पर्छ । (१) शारिरीक स्वाथ्य (२) मानसीक स्वाथ्य (३) इमोशनल विषय (४) आध्यात्मिक विषय ।
त्यसैले आदिवासी ज्ञानबाट हेरौं । एण्डोमन र निकोवार समुन्द्री टापुहरुमा बस्ने आदिवासीहरुको ज्ञानले सुनामी आउँदा बच्न सक्ने बनाएको छ । २००५ मा सुनामी आँउछ भनी समुन्द्रतट सुरक्षा अधिकारीलाई बताउँदा । दिउँसै जाँड खाएको भनी नपत्याएका र आदिवासीहरु चाही सुरक्षित ठाउँमा गएर बसेको कारण उनीहरु बाँचे । धेर्रैको अकालमा ज्यान गयो । त्यत्रो बैज्ञानिक ज्ञान हुने र उपकरणले थाहा नपाएको सुनामी आउने थाहा पाउने ज्ञान आदिवासीमा छ । कम्प्यूटर विना आँधीको अनुमान गर्न सकिन्छ भने वेकारमा कम्प्युटर चाहीयो किन ?
यो छलफलको विषय होला । तर आज लिम्बूको मुन्धुममा वा संस्कारमा आइसोलेसनको अवधारणा छ कि भनेर मुन्धुममा तथा लिम्बु संस्कारमा ज्ञान राख्ने येहाड. दाईसँग छलफल गर्दा घरमा कसैलाई रोग ब्याधी लाग्दा हिम सम्माङ, युमा सम्माङको अनुष्ठान गर्दा घर भित्र भएकालाई भित्र बाहिर गर्न नदिने र घर बाहिरबाट आउनेलाई प्रवेश गर्न नदिने साम्माङ सिक्छिङ अर्थात् घरको देउता रिसाउँछ भन्ने रहेछ । यसको तार्किक आधार वा अर्थ के हुन्छ, भने घरमा बस्नेहरु आइसोलेसनमा बसे र्औषधी र उपकार लाग्छ वा रोग अझ बढेर नजाने भन्ने देखिन्छ । त्यसैले केही दिन आइसोलेसनमा बसौं । म जस्तो छटपटेलाई भने निकै गाह्रो छ । फोन आएको आएकै छ । तर पनि मन थामेर बसेको छु । आफू पनि कोरोनाबाट सुरक्षित रहौं अरुलाई पनि राखौ ।
You have reacted on "कोरोनाको भाईरसबाट बच्ने आदिबासी ज्ञान" A few seconds ago
कविता: नसमेटिएका सुस्केरा